सरकारी कर्मचारीको एक दिनमै ८ छाक खाना ! – Radio Roshi
in समाचार — by Roshikhabar —	January 20, 2021
सामान्यतया मान्छेले दिनमा कति पटक खान सक्ला १ बढीमा ३ पटक। दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने दिनमा ८ छाक खाँदा रहेछन् !
त्यसमा पनि उही घटना भयो। दुई दिनमा चार कोठा र १० छाक खाना। त्यसको ७ हजार ३ सय भुक्तानी। प्रतिवेदनले यसलाई पनि अनियमित भनेको छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट